Wufuud Kala Duwan Oo Ku Wajahan Magaalada Garoowe – Goobjoog News
Maanta oo Axad ah ayaa lagu wadaa in magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ay gaaraan wufuud kala duwan, kuwaasi oo la filayo in goojoog ka ahaadaan heshiis halkaasi lagu saxiixi doono.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe, wasiirka arrimaha dibadda dowladda Itoobiya edros Adhanom, ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya Micheal Keating, xubno ka socda IGAD, iyo xubno kale oo beesha caalamka ah ayaa tagaya Kismaayo, xilli halkaasi ay kusii sugan yihiin wufuud kale iyo safiiro.
Goobjoog News sida ay Sabtidii idiin kugu soo gudbisay warbixin gaar ah oo aynu ka helnay magaalada Garoowe, maamulka Puntland ayaa aqbalay qaadasha nidaamka 4.5, iyadoo la is fahmay, maantana saxiix uu dhici doono. (warbixinta halkaan ka akhri)
Sidoo kale magaalada Garoowe waxaa ku sugan wafdi uu hogaaminayo Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
Qodobada Puntland laga ogolaaday waxaa ka mid ah:-
In dib u dhis loo sameeyo deegaannada Puntland
In Halkii xildhibaan ay soo doortaan 50 qof oo beeshiisiisa ah
Maamulka Puntland ayaa in badan ku celceliyey in aanay aqbali doonin qaadasha nidaamka 4.5.
Qodobada heshiiska oo dhameystiran kala soco Goobjoog News
Koonfur Afrika Oo Maanta Fariisaneysa Golaha Aammaanka Iyo Haysom Oo Is Difaacaya
Markabka Nawaal 3 Oo Kasoo Shiraacday Dekadda Mukalla Ee Yemen
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar “Rajada Aan Xamar Ku Arko Ma Wanaagsana”
Igkbmu tjtcqs buy generic cialis online cialis cost
Taejym bdzqww tadalafil online canadian cialis
Leave a Reply to otc cialis Cancel reply
Dab Ka Kacay Suuqa Bakaaraha Ee Muqdisho
legitimate cialis by mail buy cialis...
Sildenafil rique [url=https://acialisd.com/]Cialis[/url] Can...
30ml liquid cialis cialis without doctor prescription...
You can easily examine your SD memory card along with the ES...